Urrur cusub oo laga aasaasay Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xubnaha urrurka Ilama Midow Foto: Ikram Hassan
En ny somaliska förening i Rinkeby
Urrur cusub oo laga aasaasay Stockholm
La daabacay onsdag 5 augusti 2009 kl 12.31
Marka aad eeggto dhalinyaradan u xamaasadeysan sameynta urrur ay u arkaan inuu yahay urrur wax u soo kordhin kara bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan Stockholm wejiyadooda ayaad waxaad dareemeysa iney uun doonayaan in wanagasan sameeyaan. Waa dhalinyarro ka kooban gabdho iyo wiilal doonaya iney hadafkooda ku saleysan wax wanaaji hirgeliyaan.
Mana aaney u muuqan kuwo doonaya waqtiga yar ee ay meesha iskugu yimaadeen iney dhumiyaan, durba waxaa ay guda galeen dood ku saabsan qaab dhismeedka urruurkooda cusub. Walow uu qabyo ahaa oo aanan dhameystirin hadana waxaa lugna balamay in kulamadooda dambe ay sii wadi doonaan dhameystirka doodan la xirriirta xeerkooda ay ku dhaqmi doonan mustaqbalka fog.
Su’aashasu waxey tahay muxuu urrurkan soo kordhin karaa? Muxuuse uga duwanaan karaa urruradii horey u jiray ee qaarkood wax qabadkoodu la dhaliilay?. Arrintaas ayaan waxaan wax ka weydiiyey Ismahaan C/llaahi Faarax oo ah kusimaha xoghayaha urrurkan loogu magac darray ”Ila Midow”…
Ismahaan waxaa kaloo ay ka hadashay in urrurkoodu xooga saarayo siddii dhalinyarada loogu wacyi gelin lahaa iney ka dheeraadan falalka dembiyada ah ee u keenaya dhibaato naftooda.
Ugu dambeyntii urrurkan cusub ee la magac baxay ”Ila Midow” ayaa kamid ah jaaliyadaha soomaaliyeed ee ka dhisan magaaladatan Stockholm, waxaana la dhowrayaa wax qabadkiisa iyo sida uu bulshada dalkan ku dhaqan ula jaan qaado waxna uga ugu qabto soomaalida.